Ingqalutye ibhengeza iiWotshi ezikhoyo ziya kugcina uMsebenzi | IPhone iindaba
Impikiswano ixhonywe kwiLitye elingumthi. Inkampani apho umncedisi ebebhengeza ukunyamalala iinyanga, kwaye eyaphela iqinisekisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo xa uFitbit eqinisekisile ukuthengwa kwenkampani. Kwaye kwakucacile ukuba ilitye elinqabileyo alinakukwazi ukugcina isingqi semveliso kunye nentengiso kula maxabiso, kwimakethi engenayo eyayibonelela ngeewotshi ezinokusebenza ngakumbi kunye namaxabiso asezantsi. Ewe, ingqalutye ixhaswe okwethutyana ngumkhonto wabasebenzisi abathembekileyo abalandela ukusungulwa ngokusondeleyo. Ngokuqinisekileyo, Ingqalutye ibhengeze ukuba akufuneki kubekho panic njengoko iiwotshi zePebble zangoku ziya kuqhubeka nokusebenza.
Namhlanje kuxa i-Pebble ibhengeze ngeposi enkulu yebhlog ukuba iinkonzo zabo zangoku zokubukela ziya kuqhubeka nokusebenza unyaka omnye nangaphezulu. Kubonakala ngathi ingqalutye iya kuzikhawulela ekuthobeleni imiqathango yezomthetho ukuze ingajongani neengxaki zomthetho, kodwa ayicwangcisi ukwandisa ixesha elide. I-Fitbit yinkampani eyenza ezinye iintlobo zokunxiba, into eyahlukileyo kunaleyo iboniswa yiLitye leTyebile, ke siyacinga ukuba ekuphela kwento onomdla kuyo ngeTyebile iya kuba ziinjineli zayo kunye nomzi mveliso wayo. Nangona kunjalo, Asinakothuswa ngumlindo weFitbit onokuthi ngawo uphule imarike ngamaxabiso aphantsi.
Ekugqibeleni, uFitbit uza kugcina isoftware kunye neenkonzo ngo-2017, kodwa abathethi ngeminyaka ezayo. Ukucaca, kubonakala ngathi bazokuzikhawulela ekugcineni ulwazi kwiiseva, kodwa naluphi na uhlobo lohlaziyo okanye ukukhula kwexesha elizayo ukuphucula okanye ukuphumeza okungcono okuthengiswayo ngoku kuya kunyamalala ngokupheleleyo. Ngokuqinisekileyo, Ukufa kukaPebble kuya kuhamba kancinci kwaye kube buhlungu, kodwa ubuncinci abayi kushiya abasebenzisi belele ubusuku bonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ingqalutye yazisa ukuba iiwotshi ezikhoyo ziya kuqhubeka nokusebenza
Iapile inokuba kukuqesha iinjineli ezivela apha, iimephu zeGPS zeNokia zithengisiwe